ချစ်သူရဲ့ ချစ်သူ | PoemsCorner
သူ့မှာ ကိုယ်မရှိလို့ မဖြစ်ဘူးတဲ့….
ရခဲ့ဖူးတဲ့အမှတ်တရတွေကို တစ်သက်စာ သိမ်းထားလိုက်လို့….
ရှင်တစ်ယောက်ထဲအတွက် သီးသန့်….မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စကားတွေကို…..
ဒါပေမယ့်….ရှင့်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး ရှင်တစ်ဆိုရင် နှစ်မပြောရဲတာ…
မင်း စိတ်ဓာတ်က မာကျောလွန်းတယ်တဲ့…
ကျွန်မ စိတ်ဓာတ်က မာကျောသတဲ့လား….
စွပ်စွဲချက်တွေကို ရှေ့နေမလိုပဲ ပြန်ချေပလိုက်ချင်တယ်…..
ကျွန်မ မိန်းမ မဆန်ဘူး….ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…..
ကျွန်မက မာနကြီးပြီး စိတ်ဓာတ်မာကျောသတဲ့လား…..
နင် ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေကို ငါ အလွတ်ရနေတုန်းပဲ…
နင် ကြိုက်တဲ့ ဟင်းတွေကို….ငါ ချက်စားနေမိတုန်းပဲ…
နင် ကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ တွေ့ရင်….နင့်အတွက် ၀ယ်ထားနေမိတုန်းပဲ…
နင် ကြိုက်တတ်တဲ့အရောင်တွေကိုပဲ….ငါ ၀တ်နေမိတုန်းပဲ…
နင်နဲ့ တူတဲ့သူတွေ့တိုင်းလဲ…နောက်က လိုက်ကြည့်မိတုန်းပဲ…
ကိုယ်မသိတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု လာရင်…နင်များလားလို့ ရင်ခုန်နေတုန်းပဲ…
ဂျီတော့ ဖွင့်တိုင်း offline ဖြစ်နေတဲ့ နင့်နစ်ကို ငေးကြည့်နေမိတုန်းပဲ…
နင် မျက်နှာညိုရင်ဘာကြောင့်…..မျက်ခုံးတွန့်ရင်ဘာကြောင့်….နှုတ်ခမ်းတွန့်ရင်ဘာကြောင့် ဆိုတာသိရဲ့လားလို့…
နင် စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါတွေမှာတောင်….ရီချင်လာအောင် နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်ရဲ့လားလို့….
ငါ နင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ်လို့ယုံတယ်….နင့်အခက်အခဲတွေကို ကူရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံတယ်…
ချစ်ရသူရဲ့ ချစ်သူကိုလဲ တောင်းပန်ချင်တယ်…
သူသာ ကျွန်မဆီ ပြန်လာခဲ့ရင်….ငြင်းဆန်ဖို့အင်အား…တကယ်မရှိလို့ပါဆိုတာကိုပေါ့…..
In: ကဗျာ Posted By: maylaynge Date: Jul 22, 2009 All Time
ချစ်သူရဲ့အလှ … ( FOR ZMMC )
Leave comment 14 Comments & 1,704 views
ညီမလေး ရေ အမတောင်ဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းသွားသလိုပဲ
By: lwanhlainge at Jul 22, 2009
By: thukhacho at May 28, 2010
ဖတ်ရတာ ထပ်တူခံစားရပါတယ် … ညီမလေးလဲ မမလိုပဲ သူပြန်လာ၇င် လက်ခံမိမှာကြောက်နေတယ် .. တကယ်တော ပြန်လက်ခံလိုမရတောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ …… မမလိုပဲ ညီမလေးလဲ နေရာတိုင်းမှာ သူအရိပ်တွေပဲ မြင်နေတယ် … နံနက် စာ စားအခါ … …………………………………………အားလုးံပေါ မမရယ် ……… မမ ဆက်ရေးနော် မမရဲ့ကဗျာလေးတွေကို အားပေးနေမယ်နော် ..
By: Nyimalay at Sep 5, 2010
ကောင်းလွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားထက် သာတာရှိရင် အဲ့ဒီစကားကိုသုံးချင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို မြင်သာထင်ရှားအောင်ရေးနိုင်လို့ congratulation ပါနော်။ ယခုကဲ့သို့ကောင်းသောစာများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
By: Htoke Htoke at Feb 9, 2011
By: ပြည့်ဖြိုးပိုင် at Feb 9, 2011
By: အသဲကွဲမိုး at Feb 10, 2011
so strong feeling.
feel hurt so much?
same feeling with u,
ခံစားချက်လေးတွေက တော်တော်ကိုပဲ ထပ်တူကျနေပါတယ်….
By: D Myat Thoon at Jun 7, 2012
nint chit par de so de nint chit thu ka,,,
ngar lout nint ko tan phoe htar loh lar?
ngar lout nint ko nar le pay naing loh lar?
ngar lout nint ko ga yu sike pay loh lar?
ngar lout nint koanun tar khan ye lar?
ngar lout nint ko chit loh lar?
e lo ko pyaw pyit like ya hmar,,pyat pyat tar tar pyaw pyit like ya hmar.
ei lay tar so yinelo ko loak pyit hmar.,,,a hote,
By: ei lay at Jun 8, 2012
Ma daw ta sa htet pi phat mi twar par de.
Phat pi tine leayann ko khan sarr ya par de.
Kou chin le sar mi par de.
By: ei lay at Sep 3, 2012
Phat mi tine sate ma kaung phyit ya de.
A yann ko kan sarr ya de.
Htet tu htet hma wann ne mi par de shin.
Yout kyar tway ko sate kone de.
Thu doe wit le hmar ma kyauk phu lar ma ti bu naw?
By: ei lay at Dec 12, 2012
By: ei lay at Apr 30, 2013